3 घण्टा वा 8 घण्टा – रेल यात्रा एक आराम झपकी को लागी सही सेटिंग छ. यदि तपाईंलाई सडकमा निदाउनमा समस्या छ, हाम्रो 10 कसरी रेलमा सुत्ने भन्ने सल्लाहले तपाईंलाई बच्चा जस्तो सुत्नेछ. रेल यात्रा बाट कुनै पनी ट्रेन मा मीठो सपनाहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो ठाउँ मा भित्री सुझावहरु को लागी भित्री सुझाव को लागी, हामी मीठो सपनाको यात्रामा गइरहेका छौं!
कुनै राम्रो कहानी भन्दा राम्रो मन को लागी केहि पनी सेट गर्दैन, र यो तपाईको रेलमा राम्रो निद्राको लागि चाहिने जस्तै हो. तपाईंको मनपर्ने पत्रिका ल्याउँदै, वा पुस्तकमा रेल यात्रा एक ट्रेन मा सुत्न को लागी सबै भन्दा राम्रो सुझावहरु मध्ये एक हो.
जब तपाइँ पढ्दै हुनुहुन्छ तपाइँको दिमाग अर्को स्थानमा यात्रा गर्दछ, सेटिङ, र सबै दिनको चिन्ताहरू हराउँदछन्. एक महान पढाइ एक उत्कृष्ट विश्राम व्यायाम हो, कुनै पनि सावधानीपूर्वक विवरणहरू तपाईंको दिमागमा लिदै. एक वा दुई घण्टा को लागी, तपाई टाढा जानुहुन्छ, र तपाइँ निदाउन र दूर सपना बनाउन पर्याप्त छ.
बेस्ट टिप्स स्लीपनट्रेन निद्रामा स्लीपर स्लीपरट्रेन्स युरोप SleepOnATrain रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह